नेपाल ट्रष्टको जग्गा विवाद : म संलग्नै छैन, कसरी मेरो नाम श्वेतपत्रमा जोडियो?
नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन १५, २०७६, १३:५१
काठमाडौ– नेकपाका सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल ट्रष्टको जग्गामा हालैमात्र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारकाे बैठकमा विशेष समय लिएर उनले पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्र झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरे।
आफू गृहमन्त्री हुदाँ कहिले पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा प्रवेश नगरेको भन्दै त्यसमा म संलग्न भएको भनि कसरी श्वेतपत्र जारी भयो भन्दै उनले जवाफ मागे। रक्षामन्त्री पोखरेल अध्यक्ष भएको ट्रष्टको जग्गा वितरणमा संलग्नमा उल्टो नीति सुरु भएको टिप्पणी उनले गरे। ‘जग्गा दिनेहरुको नाम नलेख्ने तर संलग्न नै नभएको मानिस संलग्न भयाे भनि झुठा विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘ यो श्वेतपत्र हो कि अश्वेत पत्र हो।’
उनको भनाई जस्तो तस्तै:
नेपाल ट्रष्टको जग्गाबारे सरकारले २ दिनअघि श्तपत्र जारी गर्‍याे। यो श्वेतपत्र किन र केका लागि जारी गर्‍याे मलाई के हो थाहा छैन। मैले बुझेको श्वेतपत्र भनेको जस्ताको तस्तै हुनुपर्ने होला।
मैले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए यो श्वेतपत्रमा जग्गा वितरणमा मेरो पनि संलग्नता रहेको थियो। नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिन म पनि संलग्न भएको जानकारी पाएँ। यो कुरा सार्वजनिक भएपछि म ट्रष्टको कार्यालयमा गएँ र निवेदन दिए। मलाई हेर्न दिइएन, निवेदन दिदाँ पनि मैले हेर्न पाइन।
मैले कर्मचारीसँग सोधें मेरो नाम कसरी आयो भनेर। म गृहममन्त्री हुदाँ कहिले पनि यो कार्यालयमा प्रवेश गरेको छैन भने। कर्मचारीले उहाँ यहाँ नआएको र बैठक नबसेको जानकारी गराएको बताए।
मैले मुख्य सचिवलाई पनि सोधें । उहाँ म गृहमन्त्री हुदाँ सचिव भएकाले जानकारी लिन चाहेँ। उहाँले पनि यो झुटा हो भने। म झन आश्चर्यमा परेँ। यो श्वतपत्र हो कि अश्वेत पत्र हो भन्ने कन्फुज भएा।
यो के हो जस्तोको तस्तै आउनु पर्‍याे। २०७४ कात्तिक १३ गते निर्णय भएको भनिएको छ। थामसेर्कुलाई जग्गा दिने निर्णय भएको र म गृहमन्त्री भएको समयमा भएको भनिएको छ। तर, यसमा म संलग्न छैन कसरी नाम मुछियो। पछिल्लाे समयमा धमाधम रिसाेर्टलाई दिदाँ मितिमात्र उल्लेख गर्ने नाम उल्लेख नगर्ने तर संलग्न नै नभएकोलाई नाम मुछ्ने कार्य किन भईरहेको छ? म गृहमन्त्री असोजमा थिए। मेरो नाम छैन भन्दा भन्दै लेखियो तर अहिलेका किन लेखिएन? किन लेखियो होला भन्दा मैले दुई/चार कुरा बोलेको छु। मैले राज्य व्यवस्थामा भएका केही ऐनहरुका बारेमा बोलेको छु।
केही ऐन यसरी बोल्दा सच्चिएको छ। मैले भ्रष्टाचार अन्त्य र दललाहरुको घेराबा मुक्त हुनुपर्छ भनेको छु। सायद यो कुराले पो हो कि। जनताको अपेक्षा तीव्र छ। म यसैगरी अघि बढौं भन्दै छु। मौलिक हकमा पनि अघि बढ्नु पर्दछ भनेको छु।
मलाई तर्साउन खोजिएको हो। आत्मसर्मपण गराउन खोजिएको हो। सरकारले मलाई ढाँट्न सक्ला तर सरकारलाई कसरी ढाँट्न सक्छ? कसरी विश्वास गर्ने? विश्वासको संकट भयो। लेख्नुपर्नेको नलेख्ने तर लेख्नै नपर्नेहरुको किन लेखियो। आफ्नो पार्टीको सरकारको सर्मथन गर्दा पनि किन लेखियो। भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्दछ यो आवाज म सधै उठाउँछु।